Thaabid Cabdi oo ka hadlay Go’aankii MD Farmaajo ku joojiyay Kullankii Xildhibaanada kuna taliyay 6-Qodob. – HORNAFRIC MEDIA
Taabit Cabdi oo sheegay inuusan jirin siyaasi ka macaashi doona dagaalka siyaasadeed ee Muqdisho ka socda
Duqii hore ee Muqdisho Taabit Cabdi, ayaa soo jeediyay dhowr talo oo xal u noqon kara xiisada siyaasadeed ee ka taagan Muqdisho.
Taabit ayaa sheegay in dagaalka siyaasadeed ee ka socda Muqdisho inuusan jirin siyaasi ku faa’iidi doona wuxuu u mahad celiyay madaxweyne Farmaajo ,madaxdii hore iyo beesha Caalamka kuwaas oo door ka qaatay in la baajiyo kulankii manta ee Baarlmanka Somalia.
Qoraal uu gudoomiye Taabit soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Facebook ayaa u qornaa sidan…
Marka hore Rabbi ayaa ku mahadsan inuu baajiyay rajabeelkii maanta loo saadaalinayay Baarlamankeena marka xiga waxaan Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uga mahadcelinayaa talaabada muhiimka ah ee uu ku baajiyay kulankii maanta.
Runtii dhamaanteen waxaan qabnay walaac badan waxaan ku dadaalnay in qaranka wax loo hambeeyo waxaan la hadlay xildhibaanada labada dhinac waxaan ka codsaday inaan shacabka la niyad jabin iyo inaan sumadda Qaranka (Baarlamanka) la karaama tirin.
Sidoo kale waxaa xusid mudan sida ay arrintaan uga walaaceen Madaxdii hore iyo Beesha Caalamka oo dareensan dhibka laga soo maray in dalkaan lagu soo celiyo hanaankii dowladnimada.
Inkastoo kulankii maanta lagu guuleystay in la baajiyo hadana wali arrintu ma bisla siyaasiyiintii aragtida isku khilaafayna la iskuma keenin heshiisna ma dhicin sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa.
1. Dalku wuxuu maraya xili adag oo uu qof walba u baahan yahay sidaa darteed waa inuu qof walba qaata masuuliyadiisa.
2. Xildhibaanada waxaan ku boorinaya in wax walba laga hormariyo danta guud oo la dhowro amaanada shacabka.
3. Dagaalkan siyaasadeed sida uu u socdo iyo xilliga uu kusoo aaday marka la eego ma jiro qof ku macaashi kara sidaa darteed isu tanaasulku waa daawada muranka.
4. Madaxda sare waa in ay ogaadaan inuu waqtigu eryanayo waxaan ula jeedaa xiliga dhiman iyo howsha na hortaala oo aad u badan.
5. Waxaan soo jeedinaya inaan la toogan rajadda shacabka oo la muujiyo masuuliyad oo laga gudbo isu awood sheegad iyo is tijaabin taasoo hadii ay dhacdo hoos u dhigi karta rajada caalamku naga qabo iyo in la gaari waayo halkii lagu balamay.
6. Hay’addaha amniga waxaan ugu baaqayaa in wadooyinka loo furo Muqdishaawiyiinta oo laga qaado culeysyada heystay usbuucyadii la soo dhaafay.
Ogaada amni-darrada waxaa looga bixikaraa shacabka oo lagu kalsoonaado waana shacab dulqaad badan dowladnimadana jecel.
7. Shacabka waxaan lee yahay niyad-wanaag muujiya khilaafku waa dhamaadaa laakiin Qaranku mar walba waa jiraa.
Mdne: Thabit Cabdi Maxamed